काठमाडौं। सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच बुधबार बिहान पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा दुई पक्षबीच वार्ता भएको हो।
सरकारकोतर्फबाट वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा , प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा विप्लव समूहबाट खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदय चलाउने सहभागी थिए। केही तयारी तथा आन्तरिक परामर्शपछि पुनः बस्ने गरी आजको वार्ता टुंगिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार तथा वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको बताए। ‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच पहिलो चरणको वार्ता आज बिहान सम्पन्न भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जानकारी गराउँछु।’
गृहमन्त्री थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले आजको वार्तामा आगामीका वार्ताका लागि मोडालिटीसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको बताए। यससँगै नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग थुनामा रहेका चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ताको विस्तृत विवरण झिकाएर अर्को चरणमा थप छलफल गरिने बताइएको छ।
मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यसको एक घण्टापछि विप्लव नेकपाले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो। उक्त समूहले पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो।
दुवै वार्ता टोलीको नेतृत्वकर्ता पाँच वर्षअघिसम्म एकै पार्टीमा थिए। यसले पनि यो वार्तालाई रोचक मोडका साथ हेरिएको छ। विप्लवको वार्ता टोलीले मंगलबार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेपश्चात आज वार्तामा सहभागी भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, पछिल्लो समय समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न दुवै पक्ष तयार देखिएका थिए। वार्ताका लागि विभिन्न सूत्रमार्फत अनौपचारिक संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर, विभिन्न नेताले गरिरहेका अनौपचारिक संवाद कामयावी हुन नसकिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले परिचालन गरेको सूत्रमार्फत पहल भएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो।
यी जिल्लामा भोलि पनि सार्वजनिक बिदा
नियोमेमाको एक विद्यालयमा आगलागी : २० बालबालिकाको मृत्यु
पर्वतका कोरोना संक्रमितको बुटवलमा निधन
गण्डकी प्रदेशमा कसरी बन्दै छ नयाँ सरकार ?
एमसीसी किन रोकियो ?
८.६ प्रतिशतले बढ्याे रेमिट्यान्स, यस्तो छ फागुन महिनासम्मका अन्य आर्थिक सूचकाङ्क ?
यस्ताे छ याे बर्षकाे अन्तिम दिनकाे सुनचाँदीकाे भाउ
दुई महिने संघर्ष अभियान चलाउँदै मोहन वैद्य
बीजेपीका नेता भोले किन आए काठमाडौं ?
बैंकहरुकाे कर्जा लगानी १७ प्रतिशतले बढ्याे